आफु रित्तिएर जिन्दगिभरि दुःखका गितगाउदै सारालाई वामपन्थी बनाए, जसले छाडा गित गाएर सबथोक पाए ! | Namastepost.com
आफु रित्तिएर जिन्दगिभरि दुःखका गितगाउदै सारालाई वामपन्थी बनाए, जसले छाडा गित गाएर सबथोक पाए !
HOT NEWS January 25, 2018 ,
यो भिन्न दुई पात्रको जिबनलाई नापेर हेर्नेहो भने सत्य र असत्य बिचको ठुलो विभेद देखिन्छ, र आखिरमा असत्यको विजय भएको भान हुन्छ । जव कोमल वली आज एमालेबाट राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनिन र चारै तीरबाट बिभिन्न बिरोधका आवाजहरु उठिरहेका छन् । त्यहि बिरोध मध्यको गहकिलो मन्थन यहाँ पस्किएका छौ । जनताको गायक जीवन शर्मालाई सत्ताको कुनै लालच देखिन्न तर यिनै कोमल ओली पदका लागि कहिले राप्रपा कहिले एमाले तिर हारगुहार गर्दै दुगुरिन र अन्ततः सफल पनि भइन ।
एउटा पात्र जस्ले इन्जिनियरिङ पढ्दा पढ्दै दुनियाँ अवसर छोडेर दशकौं वर्षैं जनताका दुस्ख पिडाका गित गाएर लाखौं लाख जनतालाई वामपन्थी बनायो । त्यो उत्पिडित जनताको सङ्गितको साझा पात्र । जसलाई राज्यले आजसम्म मूल्य दिंदैन । उसको जीवन आजसम्म पनि दयनीय ढङ्गले नै बितेको छ ।
तर अर्को पात्र जसले पञ्चायतकालदेखि नै सदैब सत्ताको नजिक रहेर गीत र सङ्गितका माध्यमबाट छाडा संस्कृति भित्र्याउदै जनविरोधी हर्कत गरिरह्यो । उनै पात्रलाई आज कम्युनिस्ट नाम झुन्डिएका दलबाट छाडा गीतकै पहिचानबाट मख्ख पर्दै राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय पदमा मनोनयन गर्दैछ ।
थुईक्क‘ मेरो सङ्घीय गणतन्त्र । हामी कम्युनिस्टको नाममा एक दिनको रमझमलाई मुक्ति सम्झेर जीवनभर कष्टकर जीवन जीउन भोट हाल्ने थुईक्क‘ हामी जनता ।
नेतृत्वले जे गरेपनि आफ्नो स्वार्थको रोलक्रम बिग्रन्छकी भनेर अन्धभक्तभई स्वीकार्ने, थुईक्क‘हामी कार्यकर्ता । चाहिँदैन मलाई तिम्रो यस्तो कृत्रिम पहिचानमुखी गणतन्त्र ।
शाभार बद्रि कुमार चौलागाईको फेसबुकबाट
अराजक तथा अबसरबादी कोमल ओली
कोमल ओली सांस्कृतिक अराजक व्यक्ति हुन् । उनको ‘पोइल जान पाम’ भन्ने गित स्वयम् महिला अधिकारवादीहरुले प्रतिबन्ध लगाएको गित थियो । उनका स्टेज प्रस्तुतिहरुले के भन्छन भने, कोमल ओली आज राजनेता भएर उभिने खालका पाच्य हुने शैलीहरु कतै छैनन । उनका झ्वाँक तन्नेरीहरु कम्युनिष्टको शिष्टाचार भित्र पर्दैनन् । देश भक्ति गीतहरु सायदै छैनन होला । युवा पुस्तालाई आफ्नो उछ्रिन्कल प्रस्तुतिले भड्काउलोमा हाल्ने खालका मात्रै छन्, जसले कम्युनिष्टको सभ्य अनुसासनलाई भंग गरेका छन् ।
घोरअबसरबादी चरित्र कोमल ओलीको आर्को रङ्ग हो । हिजो खुंखार राजावादी बनेकी कोमल ओली, राजतन्त्रको नजिक मानिएको कमल थापाको राप्रपा उनको नजरमा दोश्रो राष्ट्रबादी पार्टी थियो र राप्रपा प्रवेश गर्दै हिन्दु राज्य बनाउने र राजतन्त्र फर्काउने गजबको अभिव्यक्ति पनि सुन्न पाइन्थ्यो ।
तर अन्ततः राप्रपाले स्थानीय चुनावमा नराम्रो संग हारेपछी फेरी अबसर खोज्दै एमालेका प्रभावशाली नेता संकर पोख्रेललाई भर्याङ बनाएर संकर कै प्रभावमा एमाले बनिन र आज टिकट समेत पाइन् ।
तर प्रत्यक्षबाट टिकट नपाउदा भनिन ‘एमाले त इमान्दार पार्टी हो जस्तो लाग्थ्यो तर नाताबादमा चल्ने पार्टि रहेछ’ पार्टी जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो बोल्नु यो राजनीतिक अराजक हो।
आज प्रदेश ५ बाट एमालेले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाएर टिकट दिए पछी कोमल ओलीको त्यहि मुखले फेरी भन्यो ‘सबै पार्टीलाई नजिकबाट नियाले तर राष्ट्रियता र विकास रोज्ने पार्टी एमाले मात्र भेटे’ । यो बेला भने राम्रै बोलिन तर अबसरबादको डकार झैँ गनाएको पक्कै छ ।
अब भोलि एमाले र माओबादीको पार्टी एकीकरण हुदैछ, त्यो बेला छाडा सांस्कृतिकको अराजक कलाकार सभ्य संस्कृतिका परिचालक क। प्रचण्डका होनाहार कार्यकर्ता कोमल ओली बन्ने पनि निश्चित छ ! यसकालागी पनि अग्रिम बधाई छ । बहकिएर होइन स्थिर रहेर राजनीति गर्नुहोस शुभकामना पनि छ ।